Defending The Fatherless: September 2014
It's officially the New Year in Ethiopia so we want to wish a very happy 2007 to all of our Ethiopian friends and family!
We love our Ethiopian community and are so thankful for those God has placed in our lives both here and in Ethiopia (especially these 4 cuties).
Here's Eli showing a little of his Ethiopian spunk!
The whole crew decked out in their new Ethiopian clothes that dad and Hermela
brought back from their trip.
Tomorrow we will cook, cook, cook (with lots and lots of onions) a feast of Ethiopian dishes and yummy injera (fresh from Ethiopia) and celebrate the New Year.
More to come from the big trip to Ethiopia.......stay tuned!